Maaddaama Linux aysan ku guuleysan abaalmarinta Blogs :( | Laga soo bilaabo Linux
Akhristayaasheena qaaliga ah, nasiib daro annaga ahaan, kuma guuleysan karno abaalmarinta Blog-ka Teknolojiyada ugu Fiican ee abaalmarinnada Bitácoras 2012, laakiin waxaan ku harnay qanacsanaanta kaqeybgalka iyo ka mid noqoshada ugu dambeeya.
Wali ma ogin waxa garsoorayaashu ku bixin jireen abaalmarinta, waxaan u maleynayaa kuwa awooda inay ku arkaan dhacdada khadka tooska ah inay ka warqabaan.
Dhab ahaan, haddii aan ku guuleysanno abaalmarin: Taageerada dhamaan kuwa siiyay codkooda, oo aan kaliya dhihi karno: Mahadsanid..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Maaddaama Linux aysan ku guuleysan abaalmarinta Blogs :(
@elav .. gacanta Waxaan kaa rabaa inaad igala soo xiriirto boostada aan ka tago sida ugu dhakhsaha badan ...
Boostada ayaa ladiray .. 😀
Hagaag ... maya, maya marka xigta waxay noqon doontaa 😉
In kasta oo aan jeclaan lahaa inaan ogaado doodaha ama waxa garsoorayaashu u dooran jireen qofka guuleysta, haddana waxaan u arkaa inay xiiso leedahay 😀
Waad ku mahadsan tihiin dhamaantiin taageeradiina, runtii haa, waana ku hambalyeynayaa Clara boggeeda Facebook ee ku guuleystay abaalmarinta 1aad.
Dhib malahan, aakhirka iyaga laftooda waxay dhigeen qodobada tartanka, in go'aanka uu ahaa mid aan laga noqon karin ..
Hore ayaan u dareemay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko adiga kuwa guuleysta. Dhib malahan. Waxaa jiri doona abaalmarino intaa ka sii badan oo hubaal waad heli doontaa mid, haddaba is dhiirrigeli. 🙂
Hagaag, way u xiisay. 😀 Geesinimo.
Hummm xusuusnow markaan faallo ka bixinayo in qaabka diiwaangelinta iyo codbixinta ay ila muuqatay xoogaa la yaab leh ... Aniga ahaan codbixintaas ma ahayn mid saafi ah oo ay Clara ku guuleysatay ... maxaa yeelay wax walba oo miiska la saaro (mana ahan in lagu kasbado halkan) iyo iska horimaadka waxa ku jira, kuwa raacsan, faallooyinka, iwm ... iwm ... Laga soo bilaabo Linux waa guuleyste! Macno malahan in Bitácoras uu si kale u fikiro, waxa muhiimka ah waa kuweena ku raacay adiga ayaa u maleynaya adigana waxaad tahay guuleysta
Abaalmarinta ugu fiican waa daacadnimada iyo taageerada ay had iyo jeer ka heli doonaan kuwa soo booqda. :)
Geedi socodku waa wareersan yahay qaybtuna way furantahay (is deji), horeyba waad u guuleysateen Jadwalkayga 😉 // HAHAHA xD
Iyagu weli waa kuwa ugu fiican illaa inta aan ka walwalsanahay !!!
Waxaan u maleynayaa inay tahay inay dareemaan inay ku qanacsan yihiin shaqada ay qabtaan, goobta ayaa mar horeba tixraac u ah kuwa aniga oo kale ah oo aan helin meel ay ku cabiraan aragtidooda, waxaa durbaba jiri doonta fursad lagu soo ururiyo wixii lagu beeray. Farxad
Waan kugu raacsanahay waxaad tiri, sidoo kale xaqiiqda ah inaan tixraac u noqdo dad badan taas oo ah uruurinta waxa lagu beeray ama qayb ku xiran hadba sida aad u fiirsato.
Dhankeyga, waxaan kaliya ugu mahadcelin karaa tifaftireyaasha iyo qorayaasha la wadaaga ra'yigooda iyo waaya-aragnimadooda maalin kasta iyadoo lagu saleynayo waxa ay ka barteen xiisaha ay u qabaan GNU / Linux shaqada halkan ka socota.
Maxaa ku dhacaya baloogyada tiknoolajiyada = bulshit.
fiiri labada meelood ee hore bage qashinka.
Ugu dambeyntiina, markay ku arkeen ereyga linux boggaga, waxay eegeen qaamuuskooda mana aysan fahmin, taasi waa sababta Linux aysan u qaadanayn kaalinta koowaad.
LOL !! Haa Xaqiiqdii taasi waa tii dhacday.
Hadana maya, uguyaraan waan kuqoslay faallooyinkaaga. Aad ayuu ufiican yahay. 🙂
Waxaan u maleynayaa in DesdeLinux uu u qalmo abaalmarinta, laakiin Linux wali caan kuma ahan dadka inay u codeeyaan degel sidan oo kale ah. Dhexdeenna waa haa, ka dib oo dhan waxaan nahay jilitaanno, laakiin dadka "caadiga ah" (oo aan rabin in la yareeyo qofna) weli si fiican looma yaqaan.
Waa run, waa dagaal gacan ka hadal ah oo ka dhan ah dadka caadiga ah.
"Saaxiib" ... ka fiican "macquul ahayn" sababaynta.
Haa, halkan waxaa jooga koox weyn oo dad ah oo la kaashanaya wixii ay awoodaan kuwa ka bilaabaya Linux, laakiin waji qurxoon oo ka muuqanaya facebook ... suuqgeynta ayaa heleysa sumcad dheeri ah 🙁
Garsoorayaasha ayaa ku qancay in DesdeLINUX uu u qalmo abaalmarinta, laakiin waxaan dhamaanteen si qarsoodi ah u taageernay gabadha facebook xD
LoL ilaa maanta ma aqaano waxaas waa xDDD, laakiin cinwaanku wuxuu umuuqdaa mid soo jiitay dareenka garsoorayaasha foosha xun hahahaha, kaalay halkan dhexdeenna, waan ognahay inaan nahay kuwa ugu fiican 😀
Waxaa ila soo xiriiray mid ka mid ah garsoorayaasha, wuxuu ii sheegay haddii aan hal maqaal oo dheeri ah ka haysan lahayn GIMP inuu abaalmarinta u soo diri doono Fedex una dirayo CUBA, sidaa darteed charge mas'uul qaado!
Xiriirinta natiijooyinka ayaa maqan ...
Bogagga guuleysta ee qaybta -Blogga Teknolojiyada ugu Fiican- waa -claraavilac.com- (Clara Ávila's blog)
Iyadoo la tixgelinayo inay tahay bog shaqsiyeed, halkaasoo daabacadaha ay yihiin shaqooyinka hal qof, waxay leedahay mudnaanteeda.
Inta aad ka walwalsan tahay, waxa ugu muhiimsani waa tirada badan ee soo socota ee aad haysato. Taasi waa muhiim, inta soo hartay waa hagaagsan yihiin, laakiin hubaal waad "noolaan kartaa" la'aanteed.
Hagaag, waan joogay oo waxaan dareemayaa neerfayaal qarka u saaran inuu qarxo.
Dhanka kale, POST-KAAN WUXUU QORAY IN AAN AHAY TUUG POST XD
Hagaag, waxba, sanadka soo socda markale ayaan isku dayi doonaa
Hagaag, munaasabad kale waxay noqon doontaa ... in kastoo, abaalmarin looma baahna, si loo ogaado shaqada fiican ee aad qabato.
Dhiirigelin badan iyo mahadsanid waxaad ka baraneyso adoo aqrinaya bartaada.
Adiga ayaa ugufiican !!! Ragga dhiirigeliya maalin kale waxay noqon doontaa ...
Waxaan u maleynayaa in balooggan uu yahay mid gaar u ah wixii ay raadinayeen oo lagu meeleeyay nooca guud ee guud ... midka Clara waa mid guud ... taasi waa ay noqon kartaa.
Ku guuleystaha waa FromLinux, taasi way cadahay.
Kani waa barta ugu fiican ee ku hadasha Isbaanishka Linux halkaas. Madal aad dhistayna waa hubaal inay ka fiicnaan doonto kuwa kale oo badan oo ku guuleystay abaalmarino.
Wax walba way imaan doonaan, waa hubaal.
PS: Aniga ahaan boggan waa guuleyste maxaa yeelay wuxuu inaga dhigayaa dhammaanteen kuwa soo booqda "xoogaa farxad". 😉
Runtii runta ayaa ah in abaalmarintan aniga, shaqsiyan, aanan ku faraxsaneyn gabi ahaanba. Waxa lagu xisaabtamayaa waa barta iyo maqaallada waaweyn ee halkan ku yaal GNU / Linux. Qof kasta oo ugu yar ee halkaan xiiseynaya wuxuu ka heli karaa macluumaad aan xiiso laheyn oo ku saabsan waxa iyaga xiiseynaya iyo la xiriirta gnu / LINUX. Inta kale aniga ahaan muhiim maahan.
Waan ku raacsanahay 100% fikradaada. Ku guuleysiga abaal-marinnada waxay ku dareemayaan wanaag, laakiin muhiimaddu waa shaqada la qabtay.
Hagaag, waxay ila tahay wax ceeb ah aniga laakiin sidoo kale waa inaan idhaahdaa waa inaad si ka fiican u lumiso.
Ugu dambeyntiina, saraakiishani waxay leeyihiin xeerarkooda marka ay jiraan xeerbeegti ay tahay inay go'aan gaaraan, waxay ku xiran tahay mawduucyada dadka sameeya, waad guuleysan kartaa, waad khasaari kartaa mana ka qayb geli kartid haddii aadan ku raacsanayn. shaqeynaya.
Uguyaraan ma jecli hal-abuurka abaalmarintan internetka gabi ahaanba sababtaas awgeed waligay kama qaybqaato midna (mana u malaynayo inaan waligay waxba ku guuleysan lahayn).
Dhamaadka maalinta, ma joojinayso siyaasadaynta shabaqa, iyo waxa ku soo kordha oo dhan.
Way cadahay in dhamaanteen ku codeyney, aad guuleysatey ka hor intaadan galin tartanka. Ugu dambeyntiina, tartanka noocan ah wuxuu kuxiran yahay fikirka dadka kale, mana jiraan wax ku qoran fikradaha.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa inaad illaa hadda gaadhay oo aad ku adkaystay.
Uma baahnid abaalmarintan si aad u ogaato in raggiinu aad qabtaan shaqo aad u fiican. Sii wad oo salaan!
Maamul boggaga Wordpress oo leh amarro